Tafahoatra Ity Sariitatra Sovietika Ity Ho An’ny Komonista Mpanampim-Bava · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 28 Septambra 2016 5:54 GMT
Vakio amin'ny teny বাংলা, Deutsch, русский, Español, Italiano, English
Seho tamin'ny tantara an-tsarimiaina Sovietika “Nu Pogodi” tsy nankasitrahan'ny Komonista Romanina mpanao fanampenam-bava.
Araka ny lahatsary fanadihadiana “Chuck Norris sa Komonisma“, nofafan'ny biraom-panjakana misahana ny sivana ao Romania ny seho tamin'ny sarimiaina Sovietika mahazatra “Nu Pogodi” alohan'ny fandefasana azy tamin'ny fahitalavi-panjakana nandritra ny taona 1980. Ohatra, amin'ny seho voalohany amin'ny fizarana faharoa, mitondra balaonina telo: mena, manga, mavo ny Bitro. Satria mitovy amin'ny lokon'ny sainam-pirenena Romanina ilay loko, notapahan'ny mpanampim-bava ny seho mba hisorohana ny fampifandraisana izany amin'ny fanjakazakan'ny Sovietika ao Romania.
Angamba ny “Nu Pogodi” ( “Eny, Miandry Fotsiny ianao!” na “Ho Azoko Ianao!”) no sarimiaina malaza indrindra sy be mpitia indrindra ao amin'ny Firaisana Sovietika. Vokarin'ny Soyuzmultfilm avy ao Rosia, dia mpilalao fototra roa, aingam-panahy avy amin'i Tom sy Jerry no misongasina ao anatiny: ny Amboadia ‘jiolahimboto” sy ny Bitro tsara fanahy. Mbola malaza manerana ny Firaisana Sovietika teo aloha sy ny vondrona Tatsinanana, ary koa ao amin'ny Yogoslavia teo aloha izany ankehitriny ary ao amin'ny Youtube.
Satria fanjakana zanabolana Sovietika tokoa i Romania, niezaka nitàna ny fomba fijery fa mitondra sy mitantana ny governemantany ny fitondran'i Nicolae Ceaușescu, ary anisan'ny “tsara indrindra” ny marika Komonisma izay mamaritra ho ao anatiny ny nasionalisma Romanina. “Ohatra hafa niteraka sivana tao amin'ny lahatsary fanadihadiana “Chuck Norris” ny famafana ny seho ahitana sakafo betsaka (voaràra noho ny tsy fahampiana amin'ny ankamaroan'ny vokatra fihinanana, noho ny tsy fitsinjovan'ny drafitra ara-toekarenan'ny Komonisma izany toe-javatra izany).
Namoaka ny “fizarana rehetra tamin'ny “Nu, pogodi!” tao amin'ny YouTube” i Soyuzmultfilm, anisan'izany ny famelomana indray tamin'ny taona 2014. (Tsy mety alaina ivelan'ny YouTube ireo lahatsary ireo, na izany aza.)
Noforonina tamin'ny fomba amam-panaon'ny Disney sy Warner Bros ny “No, pogodi!”. Ho an'ireo sarimiaina hafa natao ambadiky ny Ridao Vy, jereo ireo ohatra bebe kokoa avy ao Rosia [mg], Okraina [mg], ary Hongria [mg]